China Cyclone Uthuli Collector mveliso kunye nabathengisi | Xintian
Ngaphantsi kweemeko zokusebenza eziqhelekileyo, amandla e-centrifugal asebenza kumasuntswana angama-5 ~ 2500 amaxesha omxhuzulane, ke ngokusebenza komqokeleli wothuli kuphezulu kakhulu kunendawo yokulungisa amandla omxhuzulane. Ngokusekwe kulo mthetho-siseko, isixhobo sokususa uthuli senkanyamba kunye nokususa uthuli ngaphezulu kwe-90 yepesenti sifundwe ngempumelelo. Phakathi kwezinto ezisusa uthuli ngomatshini, isusa uthuli lwenkanyamba lolona lusebenzayo. Kufanelekile ukuba kususwe uthuli olungabonakali kunye nolungelulo, olusetyenziselwa ukususa ngaphezulu kwe-5μm yamasuntswana, isixhobo esinee-tube ezininzi ezinokufana ne-3μm yamasuntswana sine-80 ~ 85% yendlela yokususa uthuli. Umqokeleli wothuli wenkanyamba wenziwe ngentsimbi ekhethekileyo okanye ngezinto ze ceramic ezinobushushu obuphezulu, ukumelana nokubola kunye nokumelana nomhlwa. Inokuqhutywa phantsi kweemeko zobushushu ukuya kuthi ga kwi-1000 ℃ kunye noxinzelelo ukuya kuthi ga kwi-500 × 105Pa. Ngokwethekhnoloji kunye noqoqosho, uluhlu lokulawula ilahleko yoqokelelo lwenkanyamba luqokelele i-500 ~ 2000Pa. Ke ngoko, yeyomqokeleli othuli osebenza ngokuphakathi, kwaye inokusetyenziselwa ukucoca igesi yomsinga obushushu obuphezulu, ngumqokeleli osetyenziswa ngokubanzi othuli, osetyenziswa ngakumbi ekubuseni uthuli lwegesi yokuthambisa irhasi, ukususa uthuli olunamanqanaba amaninzi kunye nothuli lwangaphambili ukususwa. Eyona nto iphambili kuyo kukuba ukusebenza ngokususa amasuntswana othuli olucolekileyo (<5μm) kusezantsi.
I-ceramic multi-tube umqokeleli othuli sisixhobo sokususa uthuli esiqulathe iiyunithi zokuqokelela uthuli lwecyclone ezininzi (ezikwabizwa ngokuba yinkanyamba yodongwe). Inokudityaniswa ngeyunithi yokuqokelela uthuli lwecyricone okanye iyunithi yokuqokelela uthuli lwe-cyclone, ezi yunithi zidityaniswe ngokwendalo iqokobhe, ngombhobho wokutya opheleleyo, umbhobho wokukhupha kunye ne-ash hopper. Ukususwa kwe-ash ye-ash hopper kunokuba neendlela ezininzi zokususa uthuthu oluzenzekelayo, kuba esi sixhobo senziwe ngombhobho wenkanyamba yodongwe, enxibe ngakumbi kunombhobho wesinyithi, kwaye umphezulu ugudile, kunye nokumelana ne-asidi kunye nealkali, ngoko ke kwakhona kususwe uthuli olumanzi.
Ubungakanani besicelo kunye neziNzuzo
Kukulungele ukulawulwa kothuli lweentlobo ezahlukeneyo kunye neendlela zokutsha zeebhayoloji zeshishini kunye neebheyili zesikhululo samandla eshushu. Njengeziko leziko, ukubuyisela iziko, ukubilisa iziko, ukubasa amalahle, ukuvutha komlilo wamalahle, isithando senkanyamba, isithando somlilo kunye nokunye. Olunye uthuli lweshishini, umqokeleli wothuli unokusetyenziselwa ukunyanga, kodwa kunye nokusebenzisa umqokeleli wothuli ngesamente kunye nezinye izinto ezibonakalayo zokubuyisa uthuli.
Egqithileyo Y JD uthotho Star Ukothula
Okulandelayo: Icebo lokucoca ulwelo lweCartridge yothuli
I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Ingqokelela yothuli, Isihluzi seFelt Bag, Isamente Uqokeleli Uthuli, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli,